Ameerikaan Lammiileen ishii kamiyyuu gara Itoophiyaa akka hindeemne akeekkachiifte. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosAmeerikaan Lammiileen ishii kamiyyuu gara Itoophiyaa akka hindeemne akeekkachiifte.
Oduu Waxabajjii 12,2021|| Abiy Ahmed Abdii kutanna keessa galu fi Humni Benishangul Gumuz RIB dhahu
የኔቶ ጦር በኢትዮጵያ ሰማይ ሥር? ትግራይ እንደ ኮሶቮ? አስደናቂ ተመሳስሎ፤መደመጥ ያለበት!
የትግራይ የጤና ቢሮ ያወጣው ምስጢር /ለተፈፀሙ ጥቃቶች ዓለም የሚያወራው ውሸት ነው?/ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊፈትሹት የሚገባ ጉዳይ
Waxabajji 12,2021. Irreef gaachanni uummata oromoo WBOn Zoonii Lixaa Cibraan Odaa Bulluq Buttaan Eebaantu humni furgaatuu aduu saafaa Aanaa Haroo Limmuu gandaa Gaattiraa Dambiitti humna weerartuu impaayera Itoophiyaa utubuuf lubbuu uummata oromoo balleessaa jirtu irratti guyyaa har’aa tarkaanfii laalleessaa fudhateen 37 du’aan adabuun 20 ol madoo ulfaataan adaabeera. Lola kana irratti ajajaan shantamaa Silashii Wandifiroo rukutamee amma magaalaa Naqamtee gaheera. Meeshaaleen diina irra hiikaman:- kilaashii 12, Boombii 9 , fi Snayipeerii 6, tarkaanfiin itti fufa!
Via: Ijoollee Gammoojjii Tokko
Bosona oromiyaa kan gabbise mootummaa mataa isaati. Qeerroo kaleessa lubbuu wareegee aangootti isin fide kotte duudaa itti bobbaaftanii taa’ii dhaabii dhorkuun bosonni oromiyaa akka gabbatu tolcheera. Qeerroonis erga qabsoo karaa nagaatti balballi cufamee filannoo dhumaa kan ta’e qabsoo hidhannootti kitimteetti. Amma falmiin nibareeda.
Sagalee Uummata Sagalee Dhabee
Oduu SIMBIRTUU: Loltoota Eertiraa gara oromiyaati guuramuun akkuma itti fufetti jira.
Waraanni Eertiraa yookaan Shaabiyaa kumootan lakkaa’aman gara Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz galuuf imala irra ture yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa keessa qaxxaamuruun Oromiyaa, Godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Agamsaatti waraana banee jira.
Akkasumas buufata Chaagnii godhachuudhaan Matakkal irratti weerara geggeessaa jira. Dabalataan,humni guddaan Kaaba Oromiyaa, Walloo karaa daangaa Affaar galuuf naannoo Affaar kaampii RIB Buree fi Afdeeraa qubachaa jira. Humni kun lakkoofsaan kuma 17 kan caalu yoo tahu, karaa Awaashiin Magaalota kan akka Adaamaa,Bishooftuu, Duukam,Galaanii fi Finfinnee galan.
Dabalataan gara Kibba Oromiyaa fi Kibba Baha Oromiyaatti bobba’uun duula maqaa sakatta’insa WBOn uummatni keenya dararamaa jiru irratti ni hirmaata. Karaa biraan Kaaba Oromiyaa Raayyaa fi Allamaaxaa keessa qaxxaamuruun uummata Oromoo Walloo irratti weerarri banamuuf qophii cimaatu taasifamaa jira. Uummanni oromoo hundi bakka jirtuu dammaqi